Torohevitra 5 hanohanana ny sakaizanao amin'ny alàlan'ny fanaintainana maharitra - -Kevi-Pitantanana
Torohevitra 5 hanohanana ny sakaizanao amin'ny alàlan'ny fanaintainana maharitra
20 taona lasa izay, nifanena tamina lehilahy iray izay napetraka teo amin'ny lalako aho noho ny antony. Tsy mbola nisalasala an'izany aho, ary toa tsy izy koa. Saingy misy fotoana izay nanontaniako hoe tena fantany ve izay soniaviny raiki-pitia miaraka amiko.
Rehefa nanomboka nandamina ny fiainantsika izahay dia nanomboka niantso ireo dokotera. Tsy lainga, Taom-baovao vao tonga ny antso voalohany. Ireo antso dia nitohy tamin'ny valim-panadinana, fitsaboana ary ho avy tsy marin-toerana ho an'ny fahasalamako hatramin'ny andro mariazinay.
Raha vantany vao nanomboka nilamina ny vatako ny zavatra, dia handalo ny 'mason'ny tafio-drivotra' taona mahafinaritra izahay satria ho salama tsara mandritra ny fotoana maharitra. Nampianatra aho, avy eo nampiverina ny zanakay hiverina, ary lasa renim-pianakaviana mipetraka any an-trano. Saingy, satria nilaina ny niverina niasa tamin'ny fotoana sasany ho avy mba hanampiana ny volanay, dia nanomboka niverina tsimoramora aho tamin'ny asa nampiofanina ahy.
Tonga ny oram-baratra indray, ary nanapa-kevitra ny vatako fa ny fianjerana dia tsara kokoa noho ny fampianarana, ka nisintona ny valahako, nanomboka nangatsiaka ny soroko, ary narary ny hazondamosiko hatrany am-potoko hatreo amin'ny hazondamositra farany. Mangidihidy tokoa ny hoditro ary tsy nisy olona afaka nikasika ahy satria ny fikasihana maivana indrindra dia toy ny tehamaina.
Voamarina fa voan'ny aretina autoimmune Hashimoto izay toa nampirehitra fibromyalgia aho. Nody ny vadiko nahita ahy tsy nihetsika aho indray andro ary narary… nitomany vaky ny vatan'olombelona izay tsy hijanona. Ny andiana dingana nataony avy eo dia tena nilaiko tokoa mba hahasitrana.
Ity no tokony hataonao raha mijaly amin'ny fanaintainana maharitra ny namanao.
1. Angony ny olon-tianao ary eo fotsiny.
ataovy mandeha haingana any am-piasana ny fotoana
Ity no zavatra voalohany nilaza tamiko fa tsy hainy ny manampy, ary tsy hanandrana hanolotra teny fahatakarana mahatsikaiky… satria tsy nahatsapa ny fanaintainako izy ary tsy nanana fototra fampitahana zavatra toy izany ity
2. Matetika dia tsy hita ny teboka vaky ny namanao.
Tena mahay izahay milaza hoe 'Salama aho.' Ny fomba tokana hahafantarana fa tsy salama isika dia ny mijery ny masontsika… akaiky. Ny fanaintainan'ny taolana lalina dia sarotra afenina….
Ka lazao zavatra toy ny hoe azoko atao ve ny misarika fandroana tsara ho anao miaraka amin'ny sira Epsom hilentika? Na ity ity ronono turmerika ity alohan'ny hatory novakiako fa manohitra ny inflammatoire. Na dia mety tsy azonao aza, dia milaza fa manandrana ianao. Ary tena misy dikany amintsika izany.
3. Mariho fa ny fanaintainana maharitra dia eo foana… fa amin'ny ambaratonga samihafa.
ahoana no ilazana raha tianao ny ankizilahy
Androany dia mety ho 5 amin'ny ambaratonga 1-10, noho izany dia mivoaka an-tongotra ianao na mandeha mitsangatsangana kokoa aza, satria mieritreritra ianao fa milamina ny zava-drehetra. Rahampitso dia ho 8 na 10 andro.
Mitandrema fotsiny, indrindra raha mikasa ny hanao dia na fialantsasatra ho an'ny mpianakavy ianao. Ny dia “lehibe” nataontsika voalohany dia tamin'ny herintaona… ary tany amin'ny zaridaina misy lohahevitra iray izay tian'ny zanako vavy haleha efa ela. Ka voaheloka aho fa tsy kivy isan'andro. Talohan'izay dia tsy namela na inona na inona karazana ny fanaintainako. Nanao dia kely kokoa nankany amin'ny cabins izahay ary nankafiziko azy ireo ihany koa ny tena marina, saingy te ho eo aho amin'ity dia ity. Zava-dehibe tamiko izany.
4. Aza ampirisihina ny namanao tsy hanao na inona na inona tontolo andro satria tsy manampy izany.
Na dia toa manatsara ny fanaintainana aza izany… dia mampitombo ny fanaintainana indrindra amin'ny fibromyalgia. Na izany aza, raha miresaka momba ny vanin-taolana rheumatoid ianao dia mamporisika anao hitandrina aho rehefa mivezivezy amin'ny flare-up anao.
Rehefa nanomboka nihatsara kokoa tamin'ny fitantanana ny fanaintainako aho tamin'ny alàlan'ny fianarana sy fikarohana nandritra ny 3 taona momba ny teknikam-pitantanana fanaintainana voajanahary, dia nianatra momba ny yoga aho noho ny fanaintainana sy ny vanin-taolana. Fantatro izay tsiranoka synovial efa nanao ary nahoana aho no mila mavitrika kokoa amin'ny andro dia aleoko tsy manao na inona na inona… ary nianatra nitaona ny tenako ho any yoga aho tamin'izany andro izany.
Fa ny mamaivay dia zavatra sarotra, koa alao antoka fa fantatrao izay karazana fanaintainan'ny namanao ary raha maharitra sy maharitra izany, na izay antsoin'ny olona hoe 'flare ups' noho ny fivontosan'ny tonon-taolana. Izany dia afaka manampy anao hahatakatra ny fomba hampaherezana.
5. Tandremo fa ny fanaintainana dia tsy zavatra tadiavin'ny namanao ary fahavalo iraisana toy ny aretina hafa rehetra… ity iray ity ihany no tsy resahina betsaka.
Manaova sakafo hariva. Ento ny voniny. Manasa lamba. Manadio ny trano. Ary henoy fotsiny izy. Indraindray ny fihazonana mafy fotsiny dia ampy hahafantarana fa na dia tsy fantatrao aza izay hatao dia eo ianao. Manao izay tsara indrindra vitanao ianao.
Ary ambonin'izany rehetra izany, aza avela hahatsiaro ho meloka ny namanao noho ireo zavatra mety tsy ho tratrany amin'izao fotoana izao… satria indray andro, ary iray andro tsy ho ela, dia hahita fomba hitazomana ny fifandanjana eo amin'ny fanaintainana sy ny asa izy. amin'ny toerana izay manomboka mahatsapa ho toy ny taloha intsony izy.
Mety hanapa-kevitra mihitsy aza izy ny handray fampiofanana ho an'ny mpampianatra Vinyasa Yoga mandritra ny 200 ora, mba hanampiana ny hafa toa azy! Tadidio fa azo atao ny zava-drehetra ary afaka miaraka mamaky an'io ianao.
daty famoahana sarimihetsika aretha franklin
ny fomba hahatonga ny sipanao ho malahelo anao ho lasa adala
inona no hatao rehefa hamadika anao
zava-misy amin'ny fiarahana amin'ny lehilahy manambady
ny fomba fanaovana fitiavana fa tsy ny firaisana fotsiny